Ma farqiga u dhexeeya onkodka, hillaaca iyo hillaaca | Saadaasha Shabakadda
ka duufaannada Iyagu waa ifafaalooyin cilmiga saadaasha hawada ah, ma aha oo keliya iftiinka ay ka geysan karaan cirka habeenka, laakiin sidoo kale waa awoodda cajiibka ah ee dabeecaddu leedahay, oo ay ku tusayso joogitaanka onkod, hillaac iyo hillaac.
Waxay noqon karaan kuwo aad khatar u ah, markaa had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad ka ilaaliso meel aamin ah, laakiin Ma kala garan kartaa hillaaca iyo hillaaca? Oo waa maxay onkod? In kasta oo ay u ekaan karaan isku mid, haddana dhab ahaantii waa qaabab kala yara duwan. Marka, si lagaaga caawiyo inaad aqoonsato mid iyo midka kale, waxaan kuu sharxi doonaa sida ay ugu kala duwan yihiin.
2 Hillaac hillaac
Hillaacdu waa dheecaan koronto oo xoog badan. Waxay leedahay dherer ka badan ama ka yar 1500 mitir, in kastoo ay gaari karaan wax intaas ka badan. Xaqiiqdii, mid ayaa laga duubay Texas bishii Oktoobar 31, 2001 oo aan cabbirkeedu ka badnayn kana yaraan xnumxkm. Xawaaraha ay ku gaari karaan dhulka sidoo kale waa mid cajiib ah: 200.000 km / saacaddii.
Waxaa lagu soo saaraa daruuro toosan oo soo koraya oo loo yaqaan 'cumulonimbus', taas oo, marka ay gaaraan meel dhexdhexaad ah oo u dhaxaysa troposphere iyo stratosphere (oo loo yaqaan 'troppopause'), eedeymaha wanaagsan ee daruuraha la soo sheegay soo jiito diidmo, sidaasna ku dhalinaya fallaadho. Tani waa sharaxaadda cilmiyaysan ee ku saabsan sida danabku u samaysan yahay.
Hillaaca waa iftiinka aan awoodno marka duufaan koronto dhacdo. Si ka duwan hillaaca, danab waligeed dhulka ma taabto.
Ugu dambeyntiina waxaan leenahay onkodka, oo aan ahayn wax kale dhawaqii la maqlay intii lagu jiray duufaan korontada marka danabku kululaado hawada ay marayaan in ka badan 28.000ºC. Hawadaani waxay ku fiddaa xawaare sare, sidaa darteed waqti dheer kuma qaadato inay ku dhex milmaan hawada qabow ee deegaanka, taasoo keeneysa hoos u dhac heer kul ah, qandaraas.
Waxaan rajeyneynaa inaan xallinay shakigaaga oo aad hadda kala sooci karto hillaaca, hillaaca iyo onkodka. Xusuusnowna, duufaanadu waa muraayadaha dabiiciga ee cajiibka ah, laakiin had iyo jeer waa inaad uga raaxaysataa iyaga si taxaddar leh .
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay farqiga u dhexeeya onkodka, danabka iyo hillaaca
Heerka Celsius waa cabbiraadda xawaaraha? Ilaa goorma?
Jawaab Lus Reberger
Waa salaaman tahay Lus.
Heerka Celsius waa cabbiraadda heerkulka.
Waxay ogaadaan Sland, oo ah qaarad cusub oo ku taal Badweynta Baasifigga
Daraasadu waxay xaqiijineysaa saameynta isbedelka cimilada ee dhirta iyo xayawaanka Yurub